Israel izao dia mamela ny Rosiana mpizaha tany manana 2 jabs Sputnik V hiditra ny firenena
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Israel Vaovao Vaovao » Israel izao dia mamela ny Rosiana mpizaha tany manana 2 jabs Sputnik V hiditra ny firenena
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Israel Vaovao Vaovao • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Israel izao dia mamela ny Rosiana mpizaha tany manana 2 jabs Sputnik V hiditra ny firenena.
Ny olana ara-teknika sy ara-dalàna dia hita tamin'ny fomba fidirana efa misy ho an'ny mpizaha tany vahiny, izay midika fa ho azo atao ny mankany Israely manomboka ny 1 desambra 2021 ho an'ireo mpizahatany vita vaksiny Sputnik V.
Israel dia manome fahazoan-dàlana hiditra ho an'ireo mpitsidika voan'ny vaksiny COVID-19 vita Rosiana.
Ireo mpizahatany efa vita vaksiny Sputnik V tanteraka dia avela hiditra ao Israely manomboka ny 1 Desambra.
Ny vaksiny Rosiana mihitsy dia efa neken'ny Isiraely nanomboka ny 15 Novambra 2021.
Minisiteran'ny fahasalamana sy fizahan-tany israeliana ary ny biraon'ny Praiminisitra israeliana namoaka fanambarana iraisana androany, nanambara fa ireo mpitsidika avy ao amin'ny Federasiona Rosiana, izay nahazo tifitra roa tamin'ny Rosiana vita. Sputnik V Vaksiny COVID-19, avela hiditra eto an-tanindrazana manomboka ny 1 desambra.
“Ny olana ara-teknika sy ara-dalàna dia hita ao amin'ny fomba fidirana efa misy ho an'ny mpizaha tany vahiny, izay midika fa ho azo atao ny ho tonga any Israely ny mpizaha tany natao vaksiny Sputnik V manomboka ny 1 Desambra 2021. Amin'izay fotoana izay dia hapetraka ny synchronization, ara-dalàna. Ny famolavolana sy ny adidy dia vita, ary ny mekanika fidirana dia hiasa tsy misy olana mba hikarakarana ny fahasalaman'ny olom-pirenena Israeliana sy ny mpizaha tany, manome azy ireo toe-javatra mampiadana sy traikefa fitsangatsanganana mahafinaritra. Nanapa-kevitra izahay fa hanaiky amin'ny fomba ofisialy ny Rosiana i Israely Sputnik V vaksiny tamin'ny 15 Novambra 2021, ”hoy ny fanambarana.
“Roa herinandro lasa izay, nanokatra ny varavarany ho an'ireo mpizaha tany nanao vaksiny eken'ny OMS i Israely. Raha jerena ny fahombiazan'ny vaksiny tamin'ny vahoaka israeliana tamin'ny fatra fahatelo sy ny fihanaky ny aretina, ny praiminisitra israeliana Naftali Bennett, niaraka tamin'ny minisitry ny fahasalamana Nitzan Horowitz sy ny minisitry ny fizahantany Yoel Razvozov dia nanapa-kevitra ny hanesorana ny fameperana fanampiny sy ny sisintany misokatra. ho an'ireo mpizahatany natao vaksiny Sputnik V ary nahazo fitsapana antibody tsara, "hoy ny fanambarana.
Nanomboka tamin'ny martsa 2020, saika nakatona ho an'ny fizahantany i Israely. Ireo olom-pirenena niverina na vahiny izay nahazo alalana manokana ihany no afaka niditra tao amin'ilay firenena. Nanomboka tamin'ny volana Mey, ao anatin'ny fandaharan'asa mpanamory, vondrona fitsangatsanganana vahiny maromaro no nampidirina tao amin'ny firenena, vita vaksiny tanteraka tamin'ny fanafody nankatoavin'i Etazonia.
Ny Minisiteran'ny Fizahantany Israeliana dia nanambara tamin'ny volana aprily fa mihevitra ny 1 Jolay ho daty mety hanombohan'ny fidirana ao amin'ny firenena misy mpizaha tany avy amin'ny fanjakana maromaro, saingy nahemotra imbetsaka ny fampiharana ireo drafitra ireo noho ny ny toe-javatra misy ny valanaretina.
Tamin'ny 1 Novambra, nanokatra ny sisin-taniny voalohany tao anatin'ny 20 volana i Israely ho an'ireo mpizahatany vahiny nanao vaksiny tsy mihoatra ny enim-bolana lasa izay tamin'ny fanafody nankatoavin'ny OMS, miankina amin'ny fepetra maromaro momba ny isan'ny vaksiny sy boosters azo. Ny vahiny izay mahafeno ireo fepetra ireo dia tsy maintsy manao fitiliana swab 72 ora alohan'ny hiaingana ary mitoka-monina ao amin'ny seranam-piaramanidina Ben Gurion any Israely mandra-pivoakan'ny vokatra ratsy. Mba avela hiditra ao Israely, ny vahiny ao anatin'ny 14 andro alohan'ny hidirana dia "tsy afaka any amin'ny firenena ao amin'ny faritra mena, noho ny fandrahonana ny fiparitahan'ny coronavirus", hoy ny minisitry ny fahasalamana teo aloha.